Tandremo ny fametrahana tohatra vy - China Foshan Hermes Steel
Ny tohatra vy tsy misy fangarony dia malaza eto an-trano sy any ivelany, ary izy io koa dia iray amin'ireo tohatra fahita indrindra. Inona no tokony hojerentsika rehefa mametraka tohatra vy tsy misy fangarony?
1. Fitandremana amin'ny fametrahana bao tohatra vy tsy misy fangarony
1. Ny fametrahana ny arofanina dia tokony ho tanterahina mifanaraka amin'ny fepetra takiana sy ny filaharan'ny tsipika fanoratana fananganana miakatra hatrany am-piandohana.
2. Ireo bao amin'ny lafiny roa amin'ny lampihazo eo am-piandohan'ny tohatra dia tokony hapetraka aloha, ary tokony hapetaka ny fametrahana.
3. Mandritra ny fanamboarana welding, ny tehina vy dia tokony ho vita amin'ny akora mitovy amin'ny akora fototra. Mandritra ny fametrahana azy, ny tsato-kazo sy ny ampahany miorina dia tokony hamboarina vonjimaika amin'ny fantsom-bozaka. Aorian'ny fiakarana avo sy avo dia tokony ho mafy ny welding.
4. Rehefa ampiasaina ny bolt mba hampifandraisana, ny lavaka eo amin'ny lovia vy eo am-pototry ny tsato-kazo dia tokony hokarohina ho lavaka boribory mba tsy hampifanaraka ireo bolt fanitarana amin'ny toerany. Ny fanitsiana madinidinika dia azo atao mandritra ny fametrahana azy. Mandritra ny fanamboarana dia ampiasao fandavahana elektrika handrindrana ireo bolt fanitarana eo am-pototry ny tsato-kazo fametrahana, ampifandraiso ny tsato-kazo ary amboary kely izany. Raha misy lesoka amin'ny haavon'ny fametrahana dia ampifanaraho amin'ny gasket manify vy. Aorian'ireo fanitsiana mitsivalana sy avo dia alao ny visy. satroka
5. Aorian'ny fametrahana ny bao amin'ny tendrony roa dia ampiasao ny fomba mitovy amin'ny fametrahana ny bao sisa amin'ny fisintomana ny tariby.
6. Ny fametrahana ny tsato-kazo dia tokony ho mafy orina ary tsy malalaka.
7. Ny ampahany amin'ny fantsom-by sy ny fantsom-pifandraisana dia tokony hokarakaraina amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny harafesina aorian'ny fametrahana azy.
Faharoa, ny fizotra fametrahana tohatra tohatra vy
1. Fametrahana lalamby vy tsy miangona
Ny fametrahana ny ampahany miraikitra (faritra ampidirina) ny tohatra tohatra tohatra azo aorinan-dàlana dia tsy afaka mandray ampaham-pahefana afa-po fotsiny. Ny fomba ampiasaina dia ny fampiasana bolts fanitarana sy ny takela-by mba hanamboarana mpampifandray aorian'ny fametrahana azy. Apetraho aloha eo amin'ny fotodrafitrasa sivily ny tsipika ary fantaro ny tsanganana Amboary ny toeran'ny teboka, ary avy eo atsofohy ny lavaka eo amin'ny gorodon'ny tohatra misy tsiranoka misy fiantraikany, ary apetaho ireo bolt fanitarana. Ireo bolt dia mitazona ny halavany. Aorian'ny fametrahana ny baoritra, henjano ny kofehy ary atsofohy ny voanjo sy ny visy mba hisorohana ny voanjo sy ny lovia vy tsy hamaha. Ny fifandraisana misy eo amin'ny lalantsara sy ny rindrin'ny rindrina dia mandray ny fomba etsy ambony ihany koa.
2. Mandoa vola
Ny fiparitahana noho ny fanamboarana napetraka voalaza etsy ambony dia mety hiteraka lesoka. Noho izany, alohan'ny hametrahana ny tsanganana dia tokony hapetraka indray ny tsipika hamaritana ny maha-marina ny toeran'ny takelaka nalevina sy ny tsanganana mitsivalana vita amin'ny vy. Raha misy ny fiviliana dia tokony ahitsy ara-potoana izy io. Tokony ho azo antoka fa ny tsanganana vy tsy misy fangarony dia mipetaka amin'ny takelaka vy ary azo fefy manodidina.
3. Ny sandry sandry dia mifandray amin'ny tsanganana
Alohan'ny hametrahana ny lalantsara sy ny tsanganana mampifandray ilay tsanganana, ny tsipika dia apetraka amin'ny alàlan'ny tsipika elongated, ary ny làlambe dia alefa amin'ny tendrony ambony arakaraka ny zoro amin'ny tohatra sy ny boriborin'ny fantsona nampiasana. Avy eo apetaho eo amin'ny alàlan'ny tsanganana ilay lalantsara, ary apetaho amin'ny fehin-kibo avy eo amin'ny faran'ny iray mankany amin'ny farany iray. Ny fantsom-pokontany mifanila aminy dia apetraka araka ny tokony ho izy ary tery ny vitrana. Rehefa tapahina ireo fantsom-by vy mifanila aminy dia ampifangaroina amin'ny electrodes vy tsy misy fangarony ny tonon-taolana. Alohan'ny fametahana azy dia tsy maintsy esorina ireo tasy solika, burrs, faritra harafesina, sns. Ao anatin'ny 30-50mm amin'ny lafiny tsirairay amin'ny lasitra.
Telo, fikosoham-bary sy poloney
Rehefa vita ny famaohana ny tànana sy ny fantsom-batana, dia ampiasao grinder kodiarana fitotoana finday mba hampandeha tsara ny lasitra mandra-pahita ny lasitra. Rehefa manafosafo dia ampiasao ny kodiarana fitotoana flannel na tsapao ny fandefasana azy, ary ampiasao miaraka amin'ny pate polishing mifanaraka aminy, mandra-pahatongany mitovy amin'ny fotony mifototra aminy, ary tsy miharihary ny zaitra.
4. Aorian'ny fametrahana ny kiho, ny tendrony roa amin'ny tanany mahitsy sy ny tendrony roa amin'ny tehina mitsangana dia voapetraka vetivety amin'ny fantsom-bozaka.